Ukukhula ngesiquphe kwaBemi basezidolophini nokwandiswa kwezixeko kubone ukukhula okumandla kwimfuno yeZibhedlele, iiofisi, amaziko okuthenga, iifektri kunye nezindlu. Ukongeza koku umphumo woTshintsho lweMozulu unyanzelise i-HVAC njengemfuneko yokutya kunye nokuphila ngokusempilweni kuluntu oluhlala lukhula ezixekweni.
Ukusebenza kwamandla ngoku yeyona nto iphambili kufakelo olutsha lwe-HVAC. Oorhulumente kwihlabathi liphela bazise imimiselo eyilelwe ukukhuthaza ukuthathwa kweenkqubo ze-HVAC ezihambelana nemigangatho yemizi-mveliso yokusebenza ngendlela efanelekileyo.
Umzi mveliso weHVAC ngowona msebenzisi mkhulu waMandla naManzi, ngenxa yoko ujongene nekamva eliqaqambileyo kunye nenkqubela phambili kwitekhnoloji ekrelekrele. Oku kubandakanya iinkqubo zokubeka iliso ekusetyenzisweni kwamandla esakhiwo kunye nokulawula ukuphuma kwamandla kwenkqubo ye-HVAC.
Apha kulapho iimveliso ze-SPL zidlala khona indima enkulu, nokuba yeyokufudumeza, ukungena komoya, umoya opholisa umoya okanye ukupholisa, i-SPL inesisombululo esifanelekileyo sokutshintshisa ubushushu. Kwiinkqubo zokuPholisa kweSithili kwiZisombululo zeNkqubo yeMizi-mveliso, izixhobo zethu ziqinisekisa ukuGcinwa kwaMandla naManzi kubathengi bayo.
Ukuqhubeka nokuqonda isicelo, nceda unxibelelane noMmeli weNtengiso.